अष्ट्रेलियाले जनावरलाई हेलिकप्टरबाट खानेकुरा बाँड्दैछ,अझै नियान्त्रणमा आएन आगो - Naya Page Naya Page
अष्ट्रेलियाले जनावरलाई हेलिकप्टरबाट खानेकुरा बाँड्दैछ,अझै नियान्त्रणमा आएन आगो
प्रकाशित मिति : 14 January, 2020 1:07 pm
सिड्नी, पुस २८ । अष्ट्रेलियामा आगलागीबाट जोगिएका जनावरलाई हेलिकप्टरबाट खानेकुरा बाँड्न थालिएको छ।
न्यू साउथ वेल्सको प्रान्तीय सरकारले केही महिनादेखिको भीषण आगलागीमा जोगिएका रक वालावी प्रजातिका जनावरका लागि आलु र गाँजर हेलिकप्टरबाट खसालेको हो। झन्डै १ हजार किलोग्राम आलु र गाँजर खसालिसकिएको उर्जा र वातावरण मन्त्री म्याट किन जानकारी दिएका छन्। ‘रक वालावीजस्ता खतरामा रहेका प्रजातिका जोगाउनका लागि हामीले यो रणनीति अपनाएका हौं,’ उनले सिएनएनसँग भनेका छन्।
सरकारको प्रारम्भिक अनुगमनमा कंगारूजस्तो देखिने रक वालावीको ठूलो संख्या आगलागीमा मारिएको देखिएको छ।‘आगलागीले उनीहरूको बासस्थान र चरन क्षेत्र खरानी बनाइदिएकाले बाँचेकाहरूले रक वालावीले खाना पाएका छैनन्। प्राकृतिक रूपमा उनीहरूको खाना तयार नभएसम्म हेलिकप्टरबाट खाना बाँड्ने काम जारी रहन्छ,’ उनले भने। अष्ट्रेलियामा जारी आगलागीमा परी ५० करोड पशुपंक्षी मारिएको प्रारम्भिक विवरणहरू आएका छन्।
नेपालमा पुसको चिसोले हातगोडा कठ्यांग्रिरहेका बेला दक्षिणी गोलार्द्धमा पर्ने अष्ट्रेलियाको जंगलमा आगलागीका समाचार आइरहेका थिए। धेरैलाई लाग्यो( विपरित ध्रुवमा पर्ने भएकाले यहाँ जाडो हुँदा उता गर्मी हुन्छ हाम्रोमा चैत-वैशाखतिर जंगलमा आगो लागेजस्तै अष्ट्रेलियामा अचेल आगो लाग्यो होला।
महिना दिनभन्दा बढी बितिसक्यो तर अष्ट्रेलियाको आगो निभ्ने सुरसार छैन। गत साता भने अष्ट्रेलियाबाट संसारलाई नै भावुक बनाउने तस्बिर आए। ती तस्बिर मान्छेका नभई आगलागीबाट मरेका र बाँच्न सफल भएका वन्यजन्तुका थिएस् ठूलो आगोको मुस्लोबाट भाग्न नसकेका र बाँचेकोमा एकअर्कालाई अंकमाल गरिरहेका जनावरका तस्बिर । जैविक विविधता विज्ञहरूका अनुसार आगलागीमा परी यसपालि अष्ट्रेलियामा झन्डै ५० करोड बन्यजन्तु र पशुपंक्षी मारिएका छन्।
आगो कति व्यापक ?
अहिले अष्ट्रेलिया ६ मध्ये चार प्रान्तमा आगो फैलिएको छ। सबैभन्दा बढी पूर्वी तटीय क्षेत्रमा धेरै प्रभाव परेको छ। नोभेम्बर पहिलो सातासम्म मात्रै १५ सय अग्निनियन्त्रकले न्यू साउथ वेल्सका ७० ठाउँका आगो निभाउन खटिएका थिए। नोभेम्बर ११ मा उक्त राज्यले एक दशक यताकै सबैभन्दा डरलाग्दो आगलागी भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो।
कति क्षति ?
अहिलेसम्म १० करोड २० लाख एकड जमिनमा आगो पुगेको छ। गत वर्ष अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको आगो १९ लाख एकड जमिनमा फैलिएको थियो। झन्डै १०० जनाको ज्यान गएको उक्त आगलागी क्यालिफोर्नियाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हो। अष्ट्रेलियामा यसपालि १५ जनाले आगलागीमा ज्यान गुमाएका छन्। अधिकारीहरूले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्।
आगो निभाउन को खटिए ?
संघीय सरकारले केही दिनअघि स्वंयसेवकले मागे एक जनालाई ४ हजार डलरका दरले तलब दिने घोषणा गरेको छ। आगो बढ्दै गएपछि अष्ट्रेलियाले सेना परिचालन गरेको छ भने आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसँग सहायता मागेको छ। अष्ट्रेलियन प्रतिरक्षा फौजले भिक्टोरिया र न्यु साउथ वेल्समा ब्लाक हक र चिनुक हेलिकप्टर, विमान र सैन्य पानीजहाज पठाएको छ। अमेरिका र क्यानडासँग पानी ट्यांकर भएका जहाज पठाइदिन अनुरोध गरेको छ। क्यानडाले ३० अग्निनियन्त्रक पठाउने बचन दिएको छ।
अहिलेसम्म कति क्षति भयो ?
अहिलेसम्म १० करोड २० लाख एकड जमिनमा आगो पुगेको छ। गत वर्ष अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको आगो १९ लाख एकड जमिनमा फैलिएको थियो। झन्डै १०० जनाको ज्यान गएको उक्त आगलागी क्यालिफोर्नियाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हो।अष्ट्रेलियामा यसपालि १५ जनाले आगलागीमा ज्यान गुमाएका छन्। अधिकारीहरूले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्।
अष्ट्रेलियामा पानी पर्‍यो,वर्षाले केही राहत
पत्रकार महासंघ जापान शाखाको स्थापना दिवस